Farmaajo oo saacadihii ugu dambeeyay ku sugan Villa Somalia. Ciidamada ATMIS oo dad shacab ah ka qafaashay deegaanka Miirtaqwo. ICG: Awood melleteri loogama adkaan karo Al Shabaab [Warbixin]. Muwaadin reer Jabbuuti ah oo Hargeysa lagu xidhay. ETHIOPIA: Wadanka uu ka Dhacay Barakaca Ugu Badan Sanadkii Tagey Dowladda Afrikada dhexe oo lacagteeda rasmiga ah ka dhigtay Bitcoin [Warbixin]. Sarkaal katirsanaa maamulka 'Jubbaland' oo Kismaayo lagu qafaashay iyo warar kale. Jeneraal katirsanaa Ismaamulka Amxaarada oo Maxkamad lasoo taagay. Weerar 7 Askari lagu dilay oo ka dhacay degmada Balcad Sh/dhexe. Axmed Madoobe oo sheegay in uu dib ula wareegayo maamulka gobolka Gedo. Faahfaahino laga helayo Weeraro kala duwan oo ka Dhacay Magaalada Muqdisho Dowladda Hindiya oo joojisay Qamadigii ay dibadda udhoofin jirtay.
Sunday January 16, 2022 - 12:50:31
Qarax aad u culus ayaa ka dhacay Magaalada Muqdisho kaas oo lala beegsaday masuul ka tirsan DF.
Qaraxa ayaa waxaa uu haleelay gaari uu saarnaa Maxamad Ibraahim Macalimuu, kaas oo ahaa afhayeenka Xafiiska ra'iisul wasaaraha DF.
Dad ku sugan goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in gaariga uu watay Macalimuu uu burbur soo gaaray, isla markaana uu jiro khasaare ka dhashay weerarka.
Dhanka kale Xarakada Al-Shabaab al Mujaahidiin ayaa sheegatay masuuliyada weerarka ka dhacay Muqdisho.
Hadal kooban oo kasoo baxay Taliska Ciidanka Xarakada Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkaas lala beegsaday masuul ka tirsan DF, Isla markaana uu jweerarku u dhacay sidii loo qorsheeyay.
Warar kala duwan oo ay heshay SomaliMeMo ayaa kasoo baxaya xaalada Macalimuu, iyadoo qaar kamid ah goobjoogayaashu ay sheegayaan inuu soo gaaray dhaawac aad culus, isla markaana goobta laga qaaday isagoon wax dhaq-dhaqaaq ah ama miir ah lahayn.
Dhinaca kale taliska booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay weerarka lagu dhaawacay Afhayeenka xukuumadda, qoraal kale oo kasoo baxay xafiiska Rooble ayaa lagu sheegay in Macalimuu uu dhaawac soo gaaray.
Wixii faahfaahin ah ee kasoo kordha kala soco SomaliMeMo.
ICG: Awood melleteri loogama adkaan karo Al Shabaab [Warbixin].
ETHIOPIA: Wadanka uu ka Dhacay Barakaca Ugu Badan Sanadkii Tagey
Weerar 7 Askari lagu dilay oo ka dhacay degmada Balcad Sh/dhexe.
Faahfaahino laga helayo Weeraro kala duwan oo ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Qaraxyo iyo dilal ka dhacay degmooyin katirsan magaalada Muqdisho.